राजा मिदासको कथा : वरदान बन्यो श्राप ! | Ratopati
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक १५, २०७७ chat_bubble_outline0
ग्रीस भन्ने देशमा एकजना राजा थिए । उनको नाम थियो– मिदास । उनी अत्यन्तै लोभी थिए ।
एक दिनको कुरा हो, उनले कुनै राम्रो काम गरेबापत देवता खुसी भए । उनको दरबारमा ग्रीस देवता डाइनसिस प्रकट भए । उनले राजा मिदासलाई मन लागेको वर माग्न भने ।
मिदास लोभी थिए । उनको मनमा लोभ पलायो । देउताले नै आएर वरदान दिने भनेपछि के लरतरो वर माग्ने ? उनले यसो सोचे र भने, भगवान्, मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस्, मैले जे चिज छोए पनि त्यो सुन बनिहालोस् !
डायनिसस देउताले उनको लोभ थाहा पाइहाले । उनी मुसक्क हाँसे र भने, तिम्रो इच्छा पूरा होस् । अबदेखि तिमीले जे चिज छोए पनि त्यो तुरुन्तै सुन बनिहाल्छ ।’
देवताबाट वरदान पाएपछि राजा मिदास फुरुङ्ग बने । वरले काम गर्छ कि गर्दैन भनी उनले नजिकैको ढुङ्गाको मूर्ति छोए । त्यो मूर्ति तुरुन्तै सुनको मूर्तिमा बदलियो ।
अब राजा मिदासले जताततै छुन थाले । उनी जेजे छुन्थे, त्यो सुनमा परिणत भइहाल्थ्यो ।
खुसीले पागल बनेका राजा मिदासले आफू वरिपरिका सबै चिज छुँदै सुनको बनाउन थाले ।
यसबीचमा उनलाई भोक लाग्यो । उनले खानेकुरा मगाए । तर उनले त्यो खानेकुरा खान भने सकेनन् । उनले जसै खानेकुरा छोए, त्यो सुनको बनिहाल्थ्यो । भोकले रन्थनिएका उनी रुन थाले ।
राजा मिदासका छोरी थिइन् । बाबु रोएको देखेर उनले मिदासलाई अँगालो हालिन् । दुःखको कुरा, ती राजकुमारी पनि सुनको मूर्तिमा परिणत भइन् । केहीबेर अघिसम्म राजा मिदासको नजिक पर्न चाहने सबै डराउन थाले । उनीहरु राजा मिदासलाई छोइएला कि परपर भाग्न थाले ।
अब राजा मिदासलाई पछुतो भयो । उनी नितान्त एक्लो भए । आफूले अत्यधिक लोभ गर्दाको नतिजा उनले देखे । उनी भोक र छोरी मूर्तिमा परिणत भएको पीडाले चिच्याइचिच्याई रुन थाले । उनले भने– यो वरदान होइन, श्राप हो ।
जे छोए पनि सुन हुने ! यसो हेर्दा त यो गज्जबको वरदान थियो । तर त्यही वरदान राजा मिदासको लागि श्राप बन्यो । उनले केही खानेकुरा पनि खान सकेनन् । उनलाई सबैले छोडे । आखिर उनी एक्लै भए ।
भनिन्छ, राजा मिदास खानेकुरा खान नपाएपछि आखिरमा भोकले मरे ।
Title Photo: https://i.pinimg.com